Kheyraadka buufinnada hawo kulul (textures, vector, burush, images) | Abuurista khadka tooska ah
Ruben mendez | | Kaararka kartoonka
Waxaad ku aragtay buulal hawo kulul naqshadaha marar badan oo marwalba waxaad ka fakartay inaad mid ku darto nashqadda aad rabto inaad ku shaqeyso. Waa shey wanaagsan oo ay ku jiraan ururintaada kheyraadka, kaliya ku dar hal ama in ka badan sawir ahaan. Qeybtan waxaa ka mid ah dulinka buufinnada, sawirrada (lehna taariikh hufan), qaabab iyo burushka Photoshop. Wadarta xirmada ayaa leh 45 walxood.
Sida kheyraadkeena oo dhan, shaqsi ahaan iyo adeegsi ahaanba adeegsi gebi ahaanba bilaash ah! Waa kuwan horudhaca waxa aad ka heli karto xirmadan.
Waxaan haynaa sawirro buufin leh asal hufan si aan waqtiga kuugu ilaalino oo aan u qaadno hawshaas daalka iyo shaqada badan leh ee ah inaan kaa soo saaro dhammaan sawirrada. Sababta oo ah waxaan ognahay in mararka qaarkood caawimaadda aysan waxyeello u geysanaynin, marka muddadu dhammaato oo ay weli jiraan waxyaabo badan oo la qabto.
Sidoo kale Waxaan ku darnaa tijaabinta jaantusyadaada iyo inaan awood u yeelano inaad midabbada u beddesho sidaad rabto oo xitaa aan u beddelno qaabka buufinka si loogu waafajiyo, iyadoo loo marayo gooladaha, loona sii dejinayo midka aad u baahan tahay. Dabcan, waxaan ku darnaa qaar ka mid ah qaabab si aad u isticmaali karto oo aad u siiso taabashadaas aan la taaban karin naqshadahaaga sawir-qaade ama qaab farshaxanimo oo aad qiyaasi karto. Waxaad ugu adeegsan kartaa asal ahaan qaabeynta naqshadaha, waraaqaha xaashiyaha ama wixii kale oo warbaahin daabacan ah. Ama si fudud u nuqul qaababka iyo midabada si aad ugu isticmaasho sidaad rabto.
Horey ayaa loo ogaa in naqshadeeyayaasha, sawir qaadayaasha, xayeysiiyaasha, iwm., Ay leeyihiin qaab ay wax ugu eegaan qaab kale, taas oo qofka (oo aan aqoon u lahayn adduunkan) uu yahay laalaab laamiga ama cod fudud midab ahaan, midkeen kamid ah waxay noqon kartaa dhimbiilahaas aan ka maqnayn si loo gaaro fikirkaas madaxaaga sudhan.
Haddii aad jeceshahay dejintan, fiiri dhammaan ilaha aan ka heli karno CreativosOnline. Waxaan leenahay mawduucyada oo dhan, Gothic, mustaqbal, ugu yar, loogu talagalay Halloween, MegaPacks loogu talagalay Photoshop. Haddii aad rabto in lagugu wargeliyo dhammaan wararka aan ku darrayno, ha ka waaban inaad ku qorto joornaalkeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » Kheyraadka buufinnada hawo kulul (textures, vectors, burush, sawirro)